Wednesday May 18, 2022 - 18:34:45
Waxa sii xoogeysanaya walaaca laga qabo dagaalo dib uga soo cusboonaada gudaha dalka Itoobiya, iyadoo ay isi soo tarayaan digniinta kasoo yeereysa dhinacyada ku lugta leh xiisadaha ka taagan wadankaasi.
Dowlada Eritrea oo kaalin weyn ku leh colaadda ka taagan Itoobiya ayaa war ay soo saartay kaga hadashay abaabul dagaal oo ay wado Jabhada hubeysan ee Tigreega.
Xukumada Asmara wexey sheegtay in TPLF ay diyaarineyso weerar ka dhan ah dhulka Eritrea iyo deeganada dhaca waqooyiga gobolka Tigray ee ku teedsan xuduud u labada dal.
Maleshiyaadka Ismaamulka Amxaarada ayaa sidoo kale ku jira heegan sare iyagoo isku diyaarinaya ka hortaga weerarada ay qorsheyneyso TPLF.
Hadalka kasoo yeeray nidaamka Isaias Afwerki ayaa imaanaya iyadoo si weyn loo hadal hayo dagaal markale dib uga laba kacleeya gudaha Itoobiya kadib markii Ururka TPLF ay ku hanjabeen dagaal ka dhan ah xukumada dalkaasi sidoo kalena lagu fashilmay wada hadaladii socday.
Daawo sida ciidanka Gorgor loogu gummaaday Sh/dhexe [FILIM CUSUB]
Mucaaradka iyo dowladda Itoobiya oo isku eedeeyay Xasuuqii loo geystay dadka Amxaarada.
Wasiir Beylle oo sheegay in qasnadda Dowladda ay sii Marnaanayso.
Xoogag Jihaadi ah oo weeraro cusub ka fuliyay Lamu iyo Wajeer.
Al Shabaab Wadahadal mala furi doontaa dowladda Federaalka?